First Time Yangu kukwira, raiva dapurahunanzva – Vanoda Zvinhu
Ndakanga ndichangoti tangei kutiwo netsweyi nemboro, apo yakanga yongopota ichimira pose pose apo kana ndaona matako kana zvidya zvefanta kana nyangwe baby rikagara beya.
Mboro yangu zvino yakanga yoziva chayakasikirwa. Yakanga yoda kusvira. Mawet dreams akanga owanda. Raiva gore 1997 apo ndakanga ndiri form 2. Taigara neimwe hama yangu ainzi Chengetai. Chenge akanga arimukuru kwandiri. Aiva akanaka zvokuti uye aiva nechimiro chakanaka. Mazamu ake akanga akati twi achirikuboora bhurauzi. Iye ndiye akaita kuti zvakazoitika izvi zviitike. Semunhu akanga achangoti kureyi, beche rake rakangawo roda mboro.
Rakanga rovava zvino. Ininiwo ndakanga ndisati ndambosvira, uye handaifunga kutoti Chengei aida mboro yangu. Nguva zhinji taisara tiri vaviri vamwe vari kumunda masikati. Ini ndaiva nebabe rangu randaipengesana naro. Iye aisazvifarira nekuti aiti akaona ndichiverenga tsamba yechibabe aibvuta kuti ndiite chikudo naye. Akaviga tsamba iyi pamazamu ake kutsvaga kuti ndimubate bate, mboro yangu yakamira achida kuti tisvirane.
Zvakaitika kwemazuva ndokuzoona kuti mwana ndainge ndamunonokera uyu. Takatanga kuita chikudo semukomana nemusikana vanodanana. Big mistake! Tairara muimba imwe chete. Munongoziva dzimba dzokumusha dzouswa. Ini ndaifuga jira rangu ndega ndorara kukona kwangu kure naye. Iye airara nejira rake pakati pedu paikwana mita imwe. Amai vairara pamubhedha wavo vega sezvo baba vaiva kubasa kuharare. Musi uyu hope hadzina kubata nekuti ndaitoda zvebeche. Dzava kuma11 ndakakunguruka ndichiswedera kuna Chenge. Ndakasvasvavira mazamu ndokuabata chopu chopu ndikaadzora ndichitya. Iye akatoramba akaignore, ndikati chachaya. Ndakaridzorera ruoko ndokubata mazamu aya.
Ndakaabata kusvika pakuona kuti zamu harina dhiri uku mboro yangu yakanga yamira kuita chimuti. Yakanga yamira zvairwadza uku ichigwinha gwinha. Semunhu akanga asati ambosvira ndakanga ndisingazivi pane buri rebeche. Ndakasvasvavira pabeche apo pandaifunga kuti ndopariri. Ndakabata choya kusvika ndaona kuti hakuna dhiri. Chenge akanga akavata akandifuratira, ini ndichipotesa ruoko mberi kwake ndisingazive kuti beche ndairisiya kusure kumagaro kwandainge ndiri. Ndakazoti ndaneta nekupotesa ruoko ndakati beta kupinza ruoko nesure ndione. Ahaaaa ndakanzwa kunyorovera nekakutota ndikati nechemumoyo hekanhi waro ndirori. Rakanga rakaita kachuru ,ndakaribata ndokuti nechemumoyo mhoro mhoro beche. Waivepi mazuva ese apo mboro yangu payaive yakamira. Chenge akaramba akarara nhema.
Mai vairota zvavo varipamubhedha. Mboro yangu yakanga yatozviona kuti nhasi pane zvichaitika. Ndakapinza munwe wangu mubeche mwana akanga atunda kare uye akanga akavhurwa kare. Ndakarinon’ona beche ndichiguma kamwe kanhu kaiva mukati kandaisaziva. Mboro yangu yakagwinha zvehasha ndakanga ndainonokera. Ndakaburitsa mboro ndokuinangisa paburi rebeche. Chenge akangorara. Ndakaipinza mukati ndikanzwa kudziya kwainakirira. Ndakati koi koi koi koi koi ka5 ndikanzwa kunyerekedzwa mukati memboro yangu vhudzi rangu rikaita serasimuka gotsi rikaoma kuti papata. Ndakaimba manhanga kutapira nechemumoyo, ndakabva ndatunda ipapo kuti tsatsatsa. Chenge akangorara, ndakaburitsa mboro ndokukwiridzira bhurugwa raChenge. Ndakakunguruka ndichidzokera kunzvimbo kwangu. Ndakaita 3 rounds usiku ihwohwo.
Ava magwana Chenge akatanga kunyarira ainge asingade kunditarisa I quickly noticed ndikabva ndamuti manje ukadaro moms vachaita suspect. Akabva ati saka uchandisvira futi here.Takasvirana everyday for that week, imi that week i was always happy.
PREVIOUS POST Previous post: Kubhilivhisa Chisingle momz chandakaspotter while driving about kuGhetto
NEXT POST Next post: Makonhesero andakaita kamwe kaTeacher Muharare, ndobva ndakarikita nayo tsvimbo nyoro